Imishini engcono kakhulu yekhofi eshibhile ka-2022 - Umhlahlandlela wokuthenga nokunikezwayo
abenzi bekhofi abashibhile
Imishini yekhofi ehamba phambili
Izinhlobo zemishini yekhofi
Imishini yekhofi ye-Capsule
Super othomathikhi ikhofi imishini
Imishini yekhofi yase-Italy
abenzi bekhofi beconsa
abenzi bekhofi kagesi
abenzi bekhofi be-plunger
Abenzi bekhofi e-Cona
Abenzi bekhofi abakhelwe ngaphakathi
Imishini yekhofi yezimboni
imikhiqizo yekhofi umenzi
ikhofi kanye nezinsiza
izesekeli zekhofi ze-barista
ukuhlanza umenzi wekhofi
Lungiselela i-cappuccino enhle
Ikhofi ebandayo noma i-Iced Coffee
Sebenzisa umenzi wekhofi wase-Italy kahle
Yenza ikhofi ngaphandle komenzi wekhofi
yini ikhofi ukuthenga
Uma uthanda ikhofi (kanye namanye ama-infusions) futhi ucabanga ngakho khetha umenzi wekhofi ofanele ehlangabezana nezidingo zakho uzokwazi ukuthi ngokuvamile akulula ngenxa yezinhlobonhlobo ezinkulu zezinhlobo ezikhona emakethe. Futhi uma kakade kunzima ukukhetha uhlobo lomenzi wekhofi, kusenzima ukuzulazula phakathi kwenani lemikhiqizo ehlukene namamodeli akhona.
Kubasebenzisi abanganqunyelwe, kule webhusayithi sizozama ukukufundisa konke odinga ukukwazi ukuze ukwazi ukunquma ukuthi yiluphi uhlobo lomenzi wekhofi oludingayo ngokusho okuthandayo, futhi, yiziphi izinhlobo namamodeli anconyiwe esimweni ngasinye ukuze ukuthi uthole umkhiqizo ongcono kakhulu ecaleni ngalinye. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuzokuvimbela ekusebenziseni imali ngokweqile, uqiniseke ukuthi ukhokha inani elifanelekile lomkhiqizo wekhwalithi.
Imishini yekhofi ehamba phambili emakethe
Uma ungafuni ukuzenza inkimbinkimbi noma usunombono othile, mhlawumbe udinga nje ukwazi ukuthi iyiphi imishini yekhofi engcono kakhulu ongakhetha kuyo. Njengesifinyezo futhi ngaphandle kokubandlulula ngohlobo, lokhu kunjalo phezulu kwemishini yethu yekhofi esiyintandokazi:
Izinhlobo zemishini yekhofi: yini ekahle?
Alukho uhlobo olulodwa kuphela lomenzi wekhofi, ngaphandle kwalokho ukukhetha kungaba lula kakhulu. Zikhona ezintsha imishini kagesi eye yavela ukuze inikeze imiphumela engcono kakhulu nokunethezeka okukhulu, ngaphandle kokususa ngokuphelele izimbiza zekhofi zendabuko. Ngenxa yalesi sizathu, namuhla kukhona yomibili imishini yekhofi yakudala yama-purists amaningi, kanye neyanamuhla kakhulu.
Bazi kahle izinhlobo ezikhona zemishini yekhofi Kubalulekile ukwazi ukuthi ungakhetha kanjani umenzi wekhofi ohamba phambili ngokwalokho okufunayo ngempela. Sikutshela ngamagama ambalwa lapha:
I-Las abenzi bekhofi kagesi yizo zonke ezithathe indawo yemithombo yokushisa yangaphandle ngamasistimu okushisa kagesi ukuze kulungiswe ikhofi noma ama-infusions. Lolu hlobo lomenzi wekhofi ngokushesha nangokusebenza okwengeziwe ezindlini eziningi. Ngaphezu kwalokho, awadingi ukuhlanzwa noma ukunakekelwa okuyisicefe njengalezo zendabuko. Kuleli qembu ungathola:
Imishini yekhofi ye-Capsule: yizona ezikhona njengamanje, njengoba kulula kakhulu ukuzisebenzisa futhi ziyashesha. Umane ukhethe i-capsule yekhofi noma ukumnika ofuna ukukulungiselela (ezinye zikuvumela ukuthi ulungise iziphuzo ezishisayo nezibandayo), faka emshinini, futhi emizuzwaneni embalwa uzobe usulungile ingilazi noma inkomishi yakho. Isistimu yayo yokucindezela izodlulisa amanzi ashisayo ku-capsule ukuze ikhiphe ukunambitheka nephunga lokuqukethwe futhi izoyikhiphela engilazini/endebeni.
Super othomathikhi ikhofi imishini: le mishini ikuvumela ukuthi ukhethe ubhontshisi wekhofi noma ikhofi egayiwe (enikeza inkululeko enkulu ngokungaxhomeki ohlotsheni lwe-capsule esekelwe), kodwa ayidingi ukunakwa okuningi njengangaphambili. Ngokuvamile zimiswa ngesikhathi esifanele, ngaphandle kokuthi uzimise ngenxa yesistimu ekwaziyo ukuthi kungakanani okufanele kwenziwe. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile baneminye imisebenzi eyengeziwe ngokuphathelene neyangaphambili.
Imishini ye-espresso eyenziwe ngesandla: ngokungafani ne-super-automatic, ayinayo i-grinder futhi inqubo yokukhipha nokucindezela ikhofi kufanele yenziwe ngesandla. Abanye banesesekeli esakhelwe ngaphakathi sokuhwamuka, okungukuthi, ukukuvumela ukuthi wenze ngokuzenzakalelayo lawo magwebu obisi futhi unikeze ikhofi lokho kuthungwa okukhethekile kochwepheshe.
Abenzi bekhofi abakhelwe ngaphakathi: ngokuvamile ziyimishini yekhofi e-automatic super-automatic, kuphela eyakhelwe ngaphakathi ekhishini njengezinye izinto zikagesi, njengoba nje kungenziwa ngemishini yokuwasha, imishini yokugeza izitsha, ama-ovens, ama-microwaves, njll.
I-Drip noma abenzi bekhofi baseMelika: Lena imishini yekhofi kagesi evamile esebenzisa izihlungi ezilahlwayo kanye nomthombo wokushisa kagesi. Ungasebenzisa noma yiliphi ikhofi eligayiwe olithandayo. Umshini uzodlulisa amanzi ashisayo ekhofini eliphansi bese uwahluza ukuze uconse umphumela kujeke ohlanganisiwe. Kulokhu abayona i-monodose. Ezinye zihlanganisa ujeke we-thermos, ngakho zizogcina ikhofi lishisa amahora ambalwa.
Abenzi bekhofi kagesi base-Italy: okufana nokubukeka nokusebenza kwemishini yekhofi yase-Italy noma amabhodwe e-Moka enziwa ngesandla, kodwa anikwa amandla umthombo kagesi. Khumbula ukuthi imishini eminingi yekhofi yase-Italy ayisekeli izipheki zokungeniswa, yingakho ukuba khona kwenguqulo yazo kagesi.
izimbiza zekhofi zendabuko
Yilabo abaqhubeka bethembele emthonjeni wokushisa wangaphandle. Zaqanjwa eminyakeni edlule futhi zisekhona nanamuhla. Abathandi bekhofi abaningi bancamela ukuqhubeka nokulungisa ikhofi labo kulolu hlobo lomshini wekhofi, balawule yonke imininingwane kusukela ekuqaleni futhi benze “isiko” lonke baze bathole ikhofi labo eliphelele. Lokho kusho ukuthi azisheshi futhi zidinga inqubo eyenziwa mathupha, ngakho-ke akuzona ezawo wonke umuntu. Phakathi kwabo, umuntu angahlukanisa phakathi:
Imishini yekhofi yase-Italy: ziyimishini yekhofi elula kakhulu ehlanganisa ithangi lamanzi endaweni engezansi. Le deposit iyona efakwa epuletini ukuze ilishise futhi yenze amanzi abile. Ngakho ikhuphuka ngomsele bese idlula endaweni yokuhlunga lapho kutholakala khona ikhofi eliphansi. Ikhipha iphunga layo bese ikhuphuka isihlungiwe kakade ethangini elisendaweni engenhla.
abenzi bekhofi be-plunger: Kumenzi wekhofi we-plunger kuvunyelwe ukwenza ikhofi nanoma yikuphi okunye ukumnika. Kumelwe ushise amanzi aze abile kuhhavini ye-microwave noma epanini, bese uwafaka ngaphakathi komenzi wekhofi kanye nalokho ofuna ukukufaka. Uvala isivalo bese uphusha i-plunger ukuze amanzi anezinongo adlule kusihlungi sakho bese eshiya izizathu ezingezansi.
I-Cona noma abenzi bekhofi bevacuum: Iwuhlobo olungavamile kakhulu lomenzi wekhofi owasungulwa eminyakeni eminingi edlule. Ukusebenza kwayo, ngokwengxenye, kufana nesimiso sase-Italy. Lo menzi wekhofi usebenzisa umthombo wokushisa wangaphandle, njengomlilo noma isishisi ukuze ubilise amanzi esitsheni sawo esingaphansi, esinweba igesi futhi siwenze akhuphukele endaweni engenhla ngomsele ohlanganisa zombili izingxenye. Kulapho ikhofi elizothelwa litholakala khona. Lapho isuswa ekushiseni, umoya osezindaweni eziphansi uyavumelana futhi udala umphumela wokuvala, ukumunca ikhofi endaweni engenhla ngesihlungi. Umphumela wokugcina uzoba ikhofi elilungele ukuphuza phansi, lishiye izizathu phezulu.
Ekugcineni, i imishini yekhofi yezimboni Bayisigaba esihlukile. Ngokuvamile, zingahlanganiswa nezikagesi, ngoba zisebenza ngesistimu yokushisa kagesi. Kodwa zibiza kakhulu, imishini emikhulu enamakhono aphakeme. Lokhu kukuvumela ukuthi wenze ikhofi ngokushesha futhi wenze amakhofi amaningana ngesikhathi esisodwa kwezinye izimo. Afanele amabhizinisi okwamukela izihambi njengamakhefi, amabha, izindawo zokudlela, amahhotela, njll., nakuba bebaningi abawathengayo ukuze bawasebenzise ekhaya.
abenzi bekhofi abadayiswa kakhulu
Ukuqhubeka nalokhu osekushiwo kuze kube manje, lezi ezinye ze abenzi bekhofi abahamba phambili ongathenga kulo nyaka ngenani elingcono kakhulu lemali, abaholi ngezigaba zabo ngokuya ngezinhlobo zabakhi bekhofi esesizibalulile kakade:
U-De'Longhi udale omunye wemishini yekhofi ehamba phambili I-Dolce Gusto capsules ongayithola Ngamandla angu-1500w kanye nesistimu yokushisisa esheshayo ngakho-ke akumele ulinde iminithi elilodwa ukuze ikhofi lakho lilungile uma ulizwa. Ngemigoqo yayo engu-15 yokucindezela ungakwazi ukukhipha konke okuhle ekhofini noma kukhepsuli yokumnika ukuze unikeze ukunambitheka okungcono kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ihlanganisa ithangi lamanzi le-0,8-litre, elizokuvumela ukuthi wenze amakhofi amaningana ngaphandle kokuwagcwalisa kabusha. Igqama ngemisebenzi ethokozisayo, njenge lungisa iziphuzo ezishisayo noma ezibandayo, ukunakekela kulula kunangaphambili sibonga iyaxwayisa uma sekuyisikhathi sokwehla.
Umkhiqizi wase-Italy wemishini yekhofi uye wanakekela ukuklama kwalo mshini, ngemininingwane yensimbi engagqwali kanye nesimo esizohlobisa indawo lapho ubeka khona le divayisi. Kuhlanganisa futhi umsebenzi we-flow-stop ukumisa i-jet ngokuzenzakalelayo, ithreyi lokudonsa elizilungisayo lazo zonke izinhlobo zezinkomishi nezibuko, ukuvala shaqa okuzenzakalelayo ngemva kwemizuzu emi-5 yokungasebenzi, njll.
Umkhiqizi owaziwayo u-Krups udale enye yemishini yekhofi engcono kakhulu ama-capsules we-nespresso ongayithola emakethe ngentengo eshibhile. Ubuningi bokunethezeka kulo mshini ohlangene futhi ongasindi, onesibambo se-ergonomic nombala okhangayo.
Inenkinobho yokuyivula, futhi nje Imizuzwana engu-25 Kuzolunga futhi ngamanzi ekushiseni okulungile ukuze kulungiswe ikhofi elihle kakhulu. Zonke ziphakelwa ngethangi lomthamo ongu-0.7 litre, elilungiswa usayizi wenkomishi nezinkinobho zayo (i-Espresso ne-Lungo), isikhathi esifushane noma eside.
Amandla ayo kanye nengcindezi Ibha eyi-19 Baqinisekisa ukuthi ungakwazi ukukhipha yonke iphunga lebhontshisi yekhofi egayiwe kuma-capsules, kanye nezakhiwo ezilindelekile enkomishini enhle yekhofi. Ingcindezi engenawo umona ngemishini yekhofi yochwepheshe.
Ngaphezu kwalokho, it has i-anti-drip system, kanye nesistimu yokuvala shaqa okuzenzakalelayo uma uyiyeka ngaphandle kokuyisebenzisa isikhathi esingaphezu kwamaminithi angu-9.
I-Bosch TAS1007 Tassimo
Uma ukhetha i- Tassimo capsules, umenzi we-Bosch uphinde anikeze omunye wemishini yekhofi ye-capsule engcono kakhulu yale nkampani esetshenziswayo. Amandla angu-1400w, ithangi elingu-0.7 litre, kanye nomklamo ohlangene futhi okhangayo kuhambisana nalo mshini ozowuthela.
Ngalo ungakwazi ukujabulela ukunambitheka okukhethiwe iziphuzo ezingaphezu kuka-40 kushisa nakho konke ukunambitheka kwasekuqaleni. Azikho izilungiselelo eziyinkimbinkimbi, vele ukhethe i-capsule oyifunayo, cindezela inkinobho bese ulinda inkomishi yakho noma ingilazi ukuthi ilunge (ngokusekelwa okulungiswayo kosayizi abahlukahlukene).
Nokugcina i umenzi wekhofi ohlanzekile nokuthi ama-flavour awahlangani, ngemva kokusetshenziswa ngakunye umenzi wekhofi unesimiso sokuhlanza isitimu esicindezelekile ukuze asishiye silungele ukulungiselela esinye isiphuzo esihlukile ngokushesha.
I-Bosch TAS1007 Tassimo...
I-Philips HD6554/61 Senseo
Enye yemikhiqizo emikhulu yaseYurophu yiPhilips. Kulokhu unemodeli yomenzi wekhofi ama-capsules we-senso ukuthi uzothanda Itholakala ngedizayini emisha kanye nemibala eminingi ukuze ukhethe ofaneleka kakhulu ngokuya ngokuthanda kwakho.
Ingumenzi wekhofi oyingqayizivele, njengoba naphezu kokuba umthamo owodwa ikuvumela ukuba ulungiselele izinkomishi ezimbili zekhofi kanyekanye. Konke ngokushesha futhi kalula, ukukhetha ukushuba kwekhofi elide, elithambile, elifushane neliqinile olifunayo nganoma yisiphi isikhathi futhi ulinde umphumela osheshayo.
La Ubuchwepheshe be-Coffee Boost iqinisekisa ukukhipha yonke i-flavour ye-capsule ngayinye ngokucindezela kwayo, iqinisekisa ukunambitheka okungcono. Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe be-Crema Plus buqinisekisa ukuthi ungqimba lwe-crema lucolisekile futhi lunokuthungwa okungcono kuneminye imishini yekhofi kagesi. Futhi uma ungayisebenzisi, ubuchwepheshe bayo bokonga amandla buzoyicisha ngokuzenzakalelayo emizuzwini engu-30.
Oroley 12 Izindebe
Oroley Ingenye yemikhiqizo engcono kakhulu ongayithenga yalolu hlobo abenzi bekhofi base-Italy. Abantu abaningi bancamela ukulungisa ikhofi ngalolu hlobo lomenzi wekhofi wendabuko ngoba bathi bathanda ukunambitheka kwalo kangcono. Banjalo futhi isikhathi eside futhi ezishibhile.
Kuyinto eyenziwe nge-aluminium, futhi ifanele zonke izinhlobo zamakhishi, ngaphandle kokungeniswa. Ithangi layo lamanzi linomthamo wezinkomishi eziyi-12, nakuba kunosayizi abahlukahlukene ukumboza izidingo ezihlukahlukene. Kuhlanganisa ne-valve yokuphepha ukuvimbela izingozi.
I-classic yangempela yokujabulela ikhofi ngendlela yakudala, ukulalela ukugenceza nokuhogela iphunga lalo. Ngeke ishoke ekhaya lakho futhi ngaphezu kokulungiselela ikhofi elimnandi, Imishini yekhofi yase-Italy ingeza ukuthinta okuhlukile lokho ngeke kunganakwa futhi kuzonikeza ubuntu obuningi ekhishini lakho.
I-Oroley - Ikhofi...
I-De'Longhi Magnifica S Ecam 22.110.B
Uma ukhetha eyodwa super othomathikhi ikhofi umenzi, enye yezinto ezinhle kakhulu ozothola i-Italian I-De'Longhi Ecam Magnifica, enomfutho we-15 bar, amandla angu-1450w, ithangi lamanzi le-1.8 litre elikhiphekayo, iphaneli ye-LCD yokubuka ulwazi, uhlelo lwe-cappuccino, i-dispenser yekhofi eguquguqukayo yamasayizi ahlukene, nokuhlanza okuzenzakalelayo.
Ngaphandle kokungabaza, lena ingenye yemishini yekhofi ephezulu kakhulu. Inani lemisebenzi elilethayo liyamangalisa futhi isiphetho sekhofi simnandi nje. ikhofi esanda kugaywa sibonga i-othomathikhi grinder yayo phezulu kanye esiphezulu izinga uma kuziwa yenza ikhofi lakho libe ngelakho.
Lo menzi wekhofi wasekhaya unikeza mayelana imiphumela yezobuchwepheshe ukuthi uzoyithanda uma ungumthandi wekhofi elihle. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi ulungise izinkomishi ezimbili zekhofi ngesikhathi esisodwa. Futhi ngokunganciki kuma-capsules, kukuvumela ukuthi ukhethe ikhofi olithanda kakhulu.
I-De'Longhi Dedica EC685.M
I-De'Longhi eqinile iphinde inikeze enye imodeli enhle kakhulu uma ufuna enhle umenzi wekhofi wengalo okwekhaya. Ngalo menzi wekhofi uzothola amakhofi amnandi ngenxa yamandla awanikezayo angu-1350 W kanye nomfutho wayo ophezulu ngenxa yephampu yayo yendabuko engu-15 cm ewumngcingo.
Ihlanganisa isistimu ye-Thermoblock ukushisa amanzi ezingeni lokushisa elilungile kumasekhondi angu-35 nje. Isebenza nanoma yiliphi ikhofi eligayiwe kanye nama-pods "Easy Serving Espresso", ukukunikeza inkululeko enkulu lapho ukhetha umkhiqizo. Futhi, enye yezinto ezibaluleke kakhulu ingeyakho ingalo enokuzungezisa okungu-360º "capuccinatore" ukuze uthole amagwebu obisi angcono kakhulu nama-cappuccinos njengokungathi uyi-barista echwepheshile.
Ukubheja okuphephile nge elinye lamanani angcono kakhulu emali eyenzelwe bonke labo bantu abajabulela inqubo yokulungiselela ikhofi.
I-De'longhi inikezela -...
I-Oster Prima Latte II
Phakathi kwemishini yekhofi e-othomathikhi ethengiswa kakhulu yi- Oster Prima Latte, njengoba inenani elilungiswe kahle lalokho elikunikezayo ngempela. angalungiselela ama-cappuccino amnandi, ama-latte, ama-espressos, kanye nobisi olushisayo ukuze uthole igwebu elihle.
Umshini we-espresso oyinganekwane, intandokazi yamawebhusayithi amaningi nabathandi bekhofi ngenxa yokunambitheka ikunikeza ngentengo ephansi kakhulu kuneminye imishini ebiza kakhulu.
Inethangi lamanzi 1.5 litre umthamo, nelinye ithange lobisi elingu-300 ml elengeziwe. Ingashisisa ngokushesha ngenxa yamandla ayo angu-1238 W.
Ungumnikazi a Ingcindezi ye Ibha eyi-19 ukukhipha okuphezulu ekhofini, futhi unikeze ukhilimu obuningi kumphumela. Futhi kulula kakhulu ukuyihlanza, futhi ikuvumela ukuthi ususe ithangi lobisi ukuze uligcine efrijini.
Kukhona inguqulo yesibili yomshini, i I-Oster Prima Latte II, ngamandla amakhulu nomthamo, futhi nakuba ama-purists asakhetha okwangempela, kusewukubheja okuthakazelisayo.
I-Cecotec Cafelizzia 790 Shiny
Lona I-Cecotec electric coffee maker Ingenye yezinto ezithakazelisa kakhulu ngaphakathi kwalolu hlobo. Umkhiqizi odumile wamarobhothi asekhaya naye wenza imishini yekhofi enomklamo omuhle, ohlangene, futhi ozuza imiphumela emihle kakhulu uma kuqhathaniswa nezimbangi zayo eziqondile.
Inamandla angu-1350w okushisa amanzi ukuze ifakwe, i-Thermoblock ukuyenza isheshe, Ibha eyi-20 yengcindezi yokuthola ukhilimu ongcono kakhulu kanye nephunga elimnandi njengemishini yekhofi yobungcweti, kufaka phakathi isitimu ukuze kuthungwe ubisi futhi uthole igwebu elingcono kakhulu, kuvumela amanzi ashisayo ukuthi akhishwe ukuze kulungiselelwe ukugcotshwa, ithangi lamandla angu-1.2-litre, kanye ne- uhlelo lwe-anti-drip.
I-Cecotec Express Ikhofi...
I-Melitta Bheka i-Therm Deluxe
Uma ungomunye walabo abakhetha Abenzi bekhofi baseMelika noma beconsa, i-Melitta yaseJalimane ingenye yezinto ezinhle kakhulu ongazithenga. Ingumenzi wekhofi wokuhlunga kagesi, onamandla angu-1000w (isigaba A esisebenzayo), umthamo wamalitha angu-1.25, futhi eyenziwe ngensimbi engagqwali.
Izinkomishi zekhofi ezimnandi nezinephunga elimnandi ongakhetha kuzo, ezine-thermos engagcina ikhofi lishisa amahora angu-2 ngenxa yokufakwa kwe-isothermal kujeke walo. Kuhlanganisa nesivalo, isibambi sesihlungi se-anti-drip, ukuhambisana kwezihlungi ze-1 × 4, isibambo, uhlelo lokwehlisa, ukulungiswa kokuqina kwamanzi, futhi ihlanzekile umshini wokuwasha izitsha.
I-Melitta Look Therm Deluxe...
I-Cona Size D-Genius
Yinto yangempela I-Cona coffee maker, noma i-vacuum. Kukhona ezinye eziningi ezifanayo emakethe ezizama ukulingisa, kodwa yilona kuphela eligcina umklamo wangempela walo menzi wekhofi wendabuko, kanye nobuqiniso bawo, njengoba lisakhiqizwa yinkampani yakwaCona.
Kwenziwe eYurophu, ngeziqukathi ezimbili ze ingilazi ye-borosilicate ukumelana nokushaqeka okushisayo kanye nohlelo lwangempela oluzokhipha lonke iphunga nezakhiwo zekhofi ngenxa yomphumela wokumuncwa kwe-vacuum owuphawu lwalo.
Ukuba nomenzi wekhofi wase-Cona kuyibhizinisi elibucayi, uhlobo oluphelele lwesitayela nobuntu. Kungakho siphakamisa ukuthi ubalekele ukulingisa futhi ubheke i-Cona yasekuqaleni. Intengo yayo iphakeme, kodwa isitembu asifani.
I-CONA 'Size D-Genius...
Uma ukhetha ukusebenzisa i- abenzi bekhofi be-plunger, i-Bodum ingenye yezinto ezinhle kakhulu futhi ezishibhile ongazithenga. Lo menzi wekhofi unayo isitsha esiqinile sengilazi ye-borosilicate, umthamo wokulungiselela izinkomishi eziyi-8 ngesikhathi, kanye ne-plunger enesihlungi esihlanganisiwe.
Shisisa amanzi aze abile, engeza ikhofi eligayiwe noma ukumnika ofuna ukukulungisa kumenzi wekhofi, yivumele ukuthi ithele bese ucindezela i-plunger ukuze. hlunga zonke izizathu futhi abashiye bevaleleke ngemuva. Ngale ndlela uzothola isiphuzo sakho ngokushesha.
Lolu hlobo lomenzi wekhofi luzokhumbuza ngaphezu koyedwa wogogo nomkhulu wakho, futhi kunjalo inketho eshibhile, elawulekayo, elula ukuyihambisa futhi lokho kusiza ukwenza ama-infusions azo zonke izinhlobo.
Bodum 1913-01 Ikhofi...
ULelet ungomunye wabakhiqizi abahlonishwa kakhulu bemishini yekhofi ezenzakalelayo okwemboni umnikazi wehhotela. Ngensimbi engagqwali yokuhlanza kalula, igrinder yebhontshisi yekhofi ehlanganisiwe, ithangi lamanzi elinomthamo omkhulu ongu-3.5 litre, 1200 W wamandla, kanye nesistimu yokucindezela okuphezulu.
Ine-valve yezindlela ezi-3 yokomisa impushana yekhofi, iqembu lamakhanda ukulungisa ikhofi elilodwa ngesikhathi, neketela lethusi. Ihambisana nakho kokubili ubhontshisi wekhofi, ikhofi eligayiwe, kanye nama-pods ekhofi. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa uhlelo lokuhwamuka nokukhiqiza igwebu elihle.
Njengoba umkhiqizo ngokwawo ubonisa, umenzi wekhofi "kuphela abathandi bekhofi": eyenziwe ngensimbi ngokuphelele, isiphetho siyamangalisa futhi imisebenzi yayo isezingeni eliphezulu labalimi bekhofi abalifuna kakhulu.
Indlela yokukhetha umenzi wekhofi: isinyathelo ngesinyathelo isifinyezo
Uma kubonakala kuwe ukuthi izinto ziyinkimbinkimbi, sizozama ukwenza lula inqubo ukukhetha ukuthi yimuphi umenzi wekhofi ozowuthenga. Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi yini oyifunayo ukuze wazi ukuthi yini oyidingayo. Okuthile okubonakala kusobala, kodwa lokho akulula kangako ekusebenzeni. cabanga manje khetha ukuthi hlobo luni lwemali oyifunayo ukulungisa ibhodwe lakho lekhofi elizayo:
Ikhofi kuphela: Kumelwe ukhethe phakathi kwekhepsuli eyodwa ye-Nespresso, Senseo, Italian, integrable, arm, super-automatic, drip noma American, Cona, kanye nezimboni (uma kungokwebhizinisi). Ngaphakathi kwalokhu, unganciphisa amathuba kuye ngokuthi ufuna ukunethezeka okungaphezulu noma okuncane:
Ngokuzenzekelayo: Amaphilisi e-Nespresso, i-Senseo, ahlanganisiwe, ingalo, i-super-automatic.
Manual: i-drip noma i-American, i-Cona, noma imboni.
Amanye ama-infusions (itiye, i-chamomile, i-lemon balm, i-valerian, ...): Kufanele ukhethe phakathi kwe-Dolce-Gusto, i-Tassimo, noma i-plunger coffee maker. Njengasesimeni sangaphambilini, unganciphisa amathuba nakakhulu:
Ngokuzenzekelayo: kusuka ku-Dolce-Gusto noma i-Tassimo capsules.
Uma usucacelwe ukuthi yiluphi uhlobo lomshini noma umenzi wekhofi oludingayo ngokwalokho ofuna ukukulungisa, ungabona umdwebo olandelayo ukuze unqume ukuthi yiziphi umehluko wohlobo ngalunye lomenzi wekhofi, bese uqeda ukukhetha ethize:
ama-capsules: kuyashesha, kulula futhi kuyasebenziseka.
Nespresso: umphumela uyikhofi elinamandla kakhulu, elinomzimba omuhle kakhulu kanye nephunga elimnandi, kanye nokuthungwa okulungile. Ama-capsules alinganiselwe kakhulu uma kuqhathaniswa ne-Dolce-Gusto noma i-Tassimo, njengoba uthola ikhofi kuphela, yezinhlobo ezahlukene, kodwa kuphela lokho.
Dolce GustoUkubhanqa: ikhofi elinamandla, iphunga elimnandi, igwebu elihle nokuthungwa. Ngama-capsules ekhofi ahlukahlukene ezinhlobo ezahlukene (i-espresso, amabala, i-cut, i-decaffeinated,...), kanye netiye lobisi, itiye elibandayo, nezinye iziphuzo ezishisayo nezibandayo.
Tassimo: Nakuba ikhwalithi ingekho phezulu njengokubili kwangaphambilini, inikeza imiphumela efanayo. Ngaphezu kwalokho, ama-capsules ongawathola ahlukahlukene kakhulu, njengoba kwenzeka ku-Dolce-Gusto. Kusukela kumakhofi ahlukahlukene kakhulu kuya kuma-infusions nezinye iziphuzo zephathi ezaziwayo. Ngezinhlobo ezahlukene ezingaphezu kuka-40, ingenye yezinketho ezinhle kakhulu uma ufuna ukuhlukahluka ngaphezu kwakho konke okunye.
Senseo: kwenzeka njenge-Nespresso, ithi ikhawulelwe ngokwehlukahlukana. Ikhofi kuleli cala izinga lifana nekaTassimo.
I-Superautomatic, ingalo noma ehlangene: laba abathathu banemiphumela elinganayo. Amakhofi afana nalawo atholakala ku- imishini yekhofi yezimboni yochwepheshe, futhi ngenzuzo yengalo ye-vaporizer ukudala i-foam yekhwalithi ephezulu ongeke ukwazi ukuyifinyelela kuma-capsules, noma kwamanye agesi noma ajwayelekile.
ezinye zikagesi: kumakhofi aseMelika noma ama-drip, ngaphezu kokungabi lula futhi okusheshayo njengangaphambili, umphumela wekhofi uhlanzekile kakhulu, ovumela ama-aromas ahlukene nama-flavour ukuba abonwe. Naphezu kwalokhu, abathandi bekhofi elihle ababazisi kangako. Esikhundleni salokho, zingaba zinhle kulabo abafuna into eshibhile, enenkululeko yokusebenzisa noma yiliphi ikhofi, futhi abenza amanani amaningi ekhofi ngesikhathi esisodwa futhi abangasebenzisi okukodwa.
Okwesiko: inqubo ayikhululekile njengakwedlule. Kumele wenze inqubo isinyathelo ngesinyathelo ngesandla uze uthole umphumela.
Italian: zikuvumela ukuthi ulungiselele ikhofi elihle elinephunga elimnandi kakhulu. Zibuye zishibhile futhi azikho inkimbinkimbi ukuzisebenzisa, nakuba inqubo ihamba kancane. Nokho, ikuvumela ukuthi wenze inkomishi engaphezu kweyodwa ngesikhathi kuye ngosayizi.
ikhoni: uma kuyi-Cona yangempela, imiphumela mihle kakhulu. Ngokufaka ikhofi ezingeni lokushisa eliphansi kunamanye (cishe u-70ºC), lokhu kwenza ikhofi ligcine izakhiwo zalo ze-organoleptic kangcono kunezinye izinhlobo.
plunger: Banganikeza imiphumela efana neyangaphambilini. Amandla abo amakhulu ukuthi ashibhile kakhulu futhi alungele abantu asebekhulile abangazi ukusebenzisa ezanamuhla noma abangafuni ukwenza impilo yabo ibe nzima.
I-Industriales: kumabhizinisi, ukuzuza okunambitheka okuphrofeshinali nokuthungwa ngenxa yezici abazinikezayo. Ziyabiza futhi zikhudlwana. Lezi zinhlobo zemishini ye-espresso zibhalwa ngesandla, nakuba zikhona futhi ezizenzakalelayo kakhulu.
Iliphi ikhofi ongalithenga?
Kuye ngohlobo lomenzi wekhofi oyisebenzisayo, uzodinga ikhofi elilodwa noma elinye. Mhlawumbe ngisho nomenzi wakho wekhofi usekela izinhlobo eziningi zekhofi. Ngayinye yazo inezici zayo nezici zayo. Uyazi ukuthi zingaki izinhlobo amaphilisi ekhofi zikhona? Iyiphi imfihlo yokukhetha ikhofi eliphansi elingcono kakhulu? futhi uma uthenga ubhontshisi wekhofi, kanjani ukugaya kahle?
Izesekeli zekhofi: okubalulekile
Umhlaba wekhofi mkhulu futhi uma uthanda lesi siphuzo ngeke uyeke ukumangala ngenani lezinketho ezitholakalayo guqula isipiliyoni sekhofi sibe into eyingqayizivele. Kwabaningi ngisho kuwumkhuba. Nokho, kunezinye izesekeli ezibonakala zibalulekile: ama-milk fthers ukuzuza ubuhle ku-creaminess, izigayi zekhofi ukuze uthole ukuthungwa okuphelele noma thermoses ukugcina nokuthutha ikhofi lakho siqu. Hlola.
1 Imishini yekhofi ehamba phambili emakethe
2 Izinhlobo zemishini yekhofi: yini ekahle?
2.1 abenzi bekhofi kagesi
2.2 izimbiza zekhofi zendabuko
2.3 Imishini yekhofi yezimboni
3 abenzi bekhofi abadayiswa kakhulu
3.3 I-Bosch TAS1007 Tassimo
3.4 I-Philips HD6554/61 Senseo
3.5 Oroley 12 Izindebe
3.6 I-De'Longhi Magnifica S Ecam 22.110.B
3.7 I-De'Longhi Dedica EC685.M
3.8 I-Oster Prima Latte II
3.9 I-Cecotec Cafelizzia 790 Shiny
3.10 I-Melitta Bheka i-Therm Deluxe
3.11 I-Cona Size D-Genius
3.12 i-plunger bodum
3.13 I-Lelit PL41TEM
4 Indlela yokukhetha umenzi wekhofi: isinyathelo ngesinyathelo isifinyezo
5 Iliphi ikhofi ongalithenga?
6 Izesekeli zekhofi: okubalulekile
Imishini yekhofi ye-Cona kanye nemishini yekhofi ye-vacuum
Imishini yekhofi ye-Bialetti
Imishini yekhofi ye-Bosch
Abenzi bekhofi ye-Bra
Imishini yekhofi ye-Cecotec
I-DeLonghi Coffee Makers
I-Delta Coffee Makers
Imishini yekhofi ye-Dolce Gusto
Imishini yekhofi ye-Illy
Abenzi bekhofi be-Jura
Krups imishini yekhofi
Imishini yekhofi ye-Lavazza
Imishini yekhofi ye-Melitta
Abenzi bekhofi beMiniMoka
Imishini yekhofi ye-Nespresso eshibhile
Imishini yekhofi ye-Orbegozo
Abenzi bekhofi be-Oroley
Abenzi bekhofi be-Oster
Imishini yekhofi ye-Philips
Imishini yekhofi ye-Saeco
Imishini yekhofi ye-Senseo
Imishini yekhofi ye-Smeg
Abenzi bekhofi be-Solac
Imishini yekhofi ye-Tassimo
Ufesa imishini yekhofi
Izinhlobo zama-capsules ekhofi
Imishini yekhofi eshibhile 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - contacto